Olee otú ikpochapụ Internet cache na kuki na otu click
> Resource> ihichapu> Olee otú iji Hichapụ / Doro Anya Cache na Kuki na 1 Pịa
Gịnị bụ cache na kuki?
Cache abụghị ihe ọzọ karịa a ebe kere site nchọgharị weebụ gị na diski ike jide ọnụ ọgụgụ nke nwa oge faịlụ na ị na-ele ya anya, nke mere na nchọgharị nwere ike ikwu na ị na obere oge mgbe ị nweta ha ọzọ. Cookies ụfọdụ faịlụ na- kere site nchọgharị weebụ gị. Ndị a faịlụ-Elezie-eji zọpụta ọrụ-kpọmkwem ozi dị ka ịzụ ahịa cart ọdịnaya, selections na ụdị, ma ọ bụ Nyocha data, oge ọ bụla mgbe ị na-eji ha na nchọgharị gị, nke mere na ị na-adịghị mkpa ideghari ha mgbe ị mkpa ha oge ọzọ.
Internet cache na kuki na-adịghị emerụ gị na kọmputa. Ma igafe ọzọ na ndị ọzọ na-akwakọba caches nwere ike jiri kọmputa gị ịrụ ọrụ, na kuki nwere ihihi nzuzo gị na kọmputa gị. Ya mere, ị mkpa ikpochapụ internet cache na ihichapụ kuki na etiti oge.
Olee ka ihichapụ cache ma doo anya na kuki na Internet Explorer ma ọ bụ Firefox?
E nwere ụzọ abụọ n'ihi na gị nhọrọ doro anya cache na kuki nzọụkwụ site nzọụkwụ ma ọ bụ na otu Pịa.
Ngwọta 1: Clean cache na kuki aka kwụpụ site nzọụkwụ
Ngwọta 2: Clean kuki na cache na otu click
Ngwọta 1: Clean cache na kuki aka na Windows 8/7 / Vista / XP
Ọ bụrụ na ị na-eji Mozilla Firefox
1. Pịa "Ngwaọrụ" na elu toolbar ma họrọ "Doro Anya-adịbeghị anya History".
2. Họrọ "Oge iche" ikpochapụ (adaala menu).
- Họrọ "Ihe niile" ikpochapụ niile cache.
3. Pịa "Details" iji họrọ ihe akụkọ ihe mere eme ọcha na ị chọrọ ọcha.
- Eg cache na kuki
4. Pịa "Doro Anya Ugbu a," bọtịnụ.
5. Ụzọ ọpụpụ na re-igba egbe nchọgharị.
Ọ bụrụ na ị na-eji Microsoft Internet Explorer (IE7. IE8)
2. Pịa "Ngwaọrụ" na elu toolbar ma ọ bụ pịa na "Ngwaọrụ" akara ngosi.
3. Pịa "Nhọrọ Ịntanetị" na-ahọrọ "General" taabụ (ma ọ bụ na-emeghe "Internet Properties", mgbe ahụ gaa taabụ "Izugbe").
4. Pịa "Hichapụ" n'okpuru "Akụkọ Nchọgharị".
5. Pịa "Hichapụ Files" n'okpuru "Nwa Oge Internet Files".
6. pịa "Ee" na "Hichapụ Files" dialog igbe.
7. Pịa "Nso" na mgbe ahụ "OK".
Ngwọta 2: Clean kuki na cache na otu click na Windows 8/7 / Vista / XP
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ịrụ nzọụkwụ dị ka n'elu, ị nwere ike ọcha kuki na cache gị Internet Explorer na Firefox na otu click site na iji a cache na kuki Cleaner, dị ka Wondershare 1-Click PC Care.
Mgbe ulo oru na kọmputa gị, ọ ga-akpaghị aka iṅomi gị na kọmputa maka arụmọrụ, kwụsie ike na nche, iji mata ihe mere ọtụtụ ndị na-akụda mmụọ nsogbu na ị na-enwe, gụnyere kuki na caches gị Internet Explorer na Firefox. Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji pịa "Idozi Ugbu a" ọcha ha niile.
Tinyere gị click, 1-Click PC Care nwekwara nwere ike idozi nsogbu na mmetụta na-arụ ọrụ nke na kọmputa gị, ka o adị n'elu, dị ka netwọk nche, ndekọ redundancy, boosting oge, wdg All nsogbu ndị a nwere ike kpamkpam edozi na otu Pịa. Ma i nwere ike imezi gị arụmọrụ site na ịpị "1-Click PC Care Weghachi Center" na gị na desktọọpụ bụrụ na ị nwere mkpa. Mgbe ahụ, ọ ga-enye ezigbo oge nchebe maka kọmputa gị iji gbochie obi ọgụ pụọ gị PC.